Spotify အတွက်အိပ်စက်ခြင်း Timer နှင့်အခြားအရာတစ်ခု။ အံ့အားသင့်စရာ!! | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, လဲ tutorial
ငါနှင့်ပြီးလာသောသင်တို့ကိုငါတိုးနိုင်ပါတယ်ဒီ post ကိုအသစ်အတွက်¡အံ့အားသင့်စရာ!!ငါဆောင်ခဲ့ ဦး မယ် Spotify အသုံးပြုသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းတစ်ခု အထူးသဖြင့်ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာကျွန်တော်ကျန်ခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ သူတို့ဟာဂီတ streaming အတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာကိုခြွင်းချက်မရှိဖြစ်လာဖို့သေချာတယ်။
ငါဆောင်ခဲ့သောလျှောက်လွှာသည်သင်နှင့်ပိုတူသည်မဟုတ် Spotify အတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့အိပ်ချိန် timer။ အကယ်၍ သင်သည် Spotify for Android ၏ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်၏ Premium ဗားရှင်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အခမဲ့သို့မဟုတ် Android အတွက် Spotify ဗားရှင်းတွင်သင်၏ Android နှင့်ကွဲလွဲမည်မဟုတ်သောအလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်အလွန်အသုံးဝင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါပြောနေသည့်အပလီကေးရှင်းသည်ဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုအစတွင်ကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သောတူညီသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ application ကိုပုံမှန်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းငါအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည် Spotify အတွက် အန်ဒရိုd ၎င်း၏ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မဆိုအခမဲ့ဗားရှင်းသို့မဟုတ်ပရီမီယံ application ၏ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းကလွဲလို့အခြားအရာမရှိပါ Spotify အတွက်အိပ်စက် Timerအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည့်သင် Google Play Store မှဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော box မှတဆင့်တိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်သည်။
Spotify အတွက်အိပ်စက် Timer
1 Spotify အတွက် Sleep Timer ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေတကယ်ပေးသလဲ။
Spotify အတွက် Sleep Timer ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေတကယ်ပေးသလဲ။
Spotify အတွက်အိပ်စက် Timerသို့မဟုတ်တူညီသောဖြစ်လာသည်၊ Spotify များအတွက်အိပ်စက်ခြင်း timer နေရာမှာ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီးနောက် Spotify ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်ရိုးရှင်းသော်လည်းအသုံးဝင်သော shutdown timer တစ်ခုဖြစ်သည်။
အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဖွင့်စရာစာရင်းများကိုနားထောင်ခြင်းသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Spotify Android application ၏ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုပိတ်လိမ့်မည် လူကြိုက်များဂီတ streaming လျှောက်လွှာ၏။
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်ရုံနှင့် Spotify မှ Android အတွက်ဂီတပြတ်တောက်စေလိုသည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ပါPlay ပုံစံပုံစံရှိ floating ball ကို နှိပ်၍ နောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်စေခြင်းဖြင့်၊ Spotify အတွက် Sleep Timer သည်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားသော အချိန်မှစ၍ လျှောက်လွှာမှတဆင့်နားထောင်နေသောဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုပိတ်လိမ့်မည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မည် တစ်ညလုံးကစားသည့်ဂီတကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ခြင်းဖြင့်သွားနိုင်သည်, ၎င်းသည် Android အတွက်မူရင်း Spotify application သည်မည်မျှပြည့်စုံသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတွင်မူလ built-in shutdown timer မရှိပါ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အံ့သြစရာကဗီဒီယိုထဲမှာပါ ငါသည်ဤဆောင်းပါး၏အစအ ဦး ၌သင်တို့ကိုငါစွန့်ခွာခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းမပြောတတ်တာအံ့သြစရာကောင်းပေမယ့် Android သုံးသူတွေအတွက်ရော Spotify အတွက်ရော၊ မပြီးသေးတဲ့သူတွေရောပါ ၀ င်ပါလိမ့်မယ်။
ငါမပြောချင်သေးဘူး၊ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ကဘာလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်။ streaming များရှိဂီတကိုနားထောင်ရန်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ။ ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ ငါပြောနေတာကိုသင်အံ့သြချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါဒီ post ရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့မင်းမှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Spotify အတွက်အိပ်စက်ခြင်း Timer နှင့်အခြားအရာတစ်ခု။ အံ့သြစရာ!!
ဗီဒီယို🙁နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်၏ megabytes များကိုဖြုန်းရန် Buu မကောင်းပါ။
သင်အိမ်ပြန်လာသောအခါသို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်သောအခါအလျင်အမြန်မရှိ၊ မိတ်ဆွေမရှိပါ၊ ဗွီဒီယိုတွင်ရှိနေသေးသည်ကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Francisco ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းရန်သွားသည်။ ၎င်းသည်အထုပ်နှင့်အမည်တူအခြားအခြားအထုပ်တစ်ခုအကြားပaိပက္ခဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။ ငါ install လုပ်ပြီးကြောင်း spotify မသန်စွမ်းပေမယ့်ပြproblemနာရှိနေဆဲ, ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သ။
Jose Antonio နားမကြားပါ
သင်၏ Samsung Galaxy S8 သို့ပြောင်းလဲနည်း။ Bixby အလုပ်လုပ်နေ !!